Kismaayo News » Dhisamaha Isbitaalka Ceelbarde oo heer gabagabo ku dhaw
Dhisamaha Isbitaalka Ceelbarde oo heer gabagabo ku dhaw
Kn: Isku tashi ay sameeyeen shacabka iyo maamulka degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayay ku suurto galiyeen inay dhistaan Isbitaal loogu adeeggo bulshada deegaanka, laguna dabiibo bukaanka.
Isbitaalka oo maraya heer gabagabo ah ayna rajaynayaan inay dhamaystiraan dabayaaqada bisha ina soo aadan ee Febaraayo ayaa la filayaa inuu bulshada deegaanka ka kaafiyo baahida ay u qabaan dhinaca caafimaadka.
Gudoomiha degmada Ceelbarde, Mudane Cabdirisaaq Cumar oo lahaa hal abuurka yagleelista Isbitaal ay yeelato degmadu isla mar ahaantaana ku bixiyay dadaal dheer hirgalinta himiladaasi ayaa sheegay inaysan dawladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed midna wax saacidaad ah ka helin. Cumar wuxuu amaan iyo bogaadin u jeediyay jaaliyadda Ceelbarde ee ku dhaqan deegaamada maamul gobolleedka Puntland oo ayagu ka saacidday dhismaha Isbitaalka dhamaan biraha shubka galaya iyo 100 kiish oo shamiito ah wuxuuna ugu baaqay guud ahaan dadka samaha jecel, gaar ahaanna qurbe joogta ka soo jeeda deegaanka inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka dhismaha isbitaalka iyo qalabayntiisa.
Degmada Ceelbarde ayaa burburkii dawladdii dhexe kadib waxaa baaba’ay dhismayaashii dawliga ahaa ee bulshada loogu adeegayay kuwaasi oo Isbitaalku kow ka ahaa, wuxuuna maamulka degmadu iska xilqaamay inuu dib u soo celiyo dibna u hawlgaliyo Isbitaalkii iyo iskuulladii magaaladu lahaan jirtay barisamaadkii.